xadiis – Garanuug
Home / Tag Archives: xadiis
Tag Archives: xadiis
November 21, 2016	Abwaan, Taariikh Nololeed 0 9,285
November 7, 2016	Abwaan, Taariikh Nololeed 0 9,733
October 14, 2016	Abwaan, Taariikh Nololeed 0 9,536
June 19, 2016	Qoraallo, Xadiis 0 9,312
Waxyiga Ilaahay noo soo dhiibay waa quraanka iyo xadiiska oo ah hadalkii iyo dhaqankii Rasuulka NNKH. Quraanka si gaar ah ayaa Ilaahay u ilaaliyey oo quraanka aan hadda haysanno waa hubaal. Laakiin waxaa ilaa qarniyadii ugu horreeyey Islaamka jirey in si xad dhaaf ah la isugu dayey in la abuuro ...
April 25, 2016	Abwaan, Waa Maxay...? 0 8,236
Af-Carabi ahaan erayga xadiis (الحديث) waa wax cusub. Macnihiisa labaad waa war (الخبر). Dhanka eraybixinta, xadiisku waa war la xidhiidha hadalkii, falkii, tilmaantii, iyo dhacdooyinkii Nebiga- sallal Laahu calayhi wasallam-. Xadiiska Nebiga- sallal Laahu calayhi wasallam- waxaa kale oo lagu tilmaamaa sunnah (السنة). Qur’aanka kaddib, xadiisku waa asalka labaad ee diinta ...
March 27, 2016	Abwaan, Waa Maxay...? 0 5,875
“Gar laba nin kama wada qosliso”
March 30, 2017	202,283